Soo dejisan Uplay 1.3.26 – Android – Vessoft
Uplay – macmiil ah dukaan digital ah sameeysa garanayo publisher shirkadda ciyaarta video Ubisoft. Uplay kuu ogolaanayaa inaad si ay u iibsadaan koobi digital kulan la horumariyo ama ay daabacday shirkadda. Software ayaa awood u download goodhiyaha mashaariic iyo ciyaaraha, in loo qaybiyey by model ah Free4Play. Uplay kuu ogolaanayaa inaad u ciyaaro kulan la saaxiibo ama kuwo kale ee hab multiplayer. Software waxay leedahay lacagta gudaha ah si ay u iibsadaan kulan la soo iibsan karo lacag dhab ah ama aad shaqayso adigoo ka qayb dallacaadaha kala duwan ama tartanka.
Awoodda in ay iibsadaan koobi digital ah kulan
Kulankaan ayaa in hab multiplayer
Jiritaanka dallacsiinta iyo tartan oo kala duwan
English, Français, Deutsch, Русский... Mobile9 2.2.4